Ulapha : Ikhaya>Product>GRG Acoustic Board
Iphaneli ye-acoustic ye-GRG
Inombolo Model: Iphaneli ye-acoustic ye-GRC
I-GRG ilandela umgomo wokwenza omncane kepha ungabi mnene. Isilinganiso se-Bionic + isilinganiso sokudluliswa komsindo + isilinganiso sokufaka umsindo = 1, sifinyelela umphumela we-acoustic womugqa ogelezayo womsindo ogelezayo.
1. Akukho ukuguqulwa
Njengoba i-gypsum eyinhloko ye-GRG ingenawo umthelela owonakalisayo kwimicu yengilazi, futhi isilinganiso se-shrinkage esomile esimanzi singaphansi kwe-0.01%, umkhiqizo ungaqinisekiswa ukuthi ube nokusebenza okuzinzile, ukuqina, ukungaboli, ukungabi nalutho kanye nokuphila kwenkonzo ende.
2. Isisindo esikhanyayo
Ubukhulu obujwayelekile bengxenye ethambile yemikhiqizo ye-GRG ngu-3.2 kuya ku-8.8MM (ungagqinsiwa ngezidingo ezikhethekile), futhi isisindo ngesikwele esiyimitha kuphela ngu-4.9 kuye ku-9.8KG, okunganciphisa isisindo sesakhiwo esikhulu nomthwalo zezakhi.
I-3. Amandla aphezulu
Ucwaningo lukhombisa ukuthi umthwalo we-fracture yemikhiqizo ye-GRG ungaphezulu kwe-1200N, ophindwe kayishumi kunomthwalo wokuqhekeka we-10N we-JC / T118-799 yamazwe onke webhodi yamazwe aphesheya.
Ipuleti le-GRG liyipuleti enenombolo enkulu yama-micropores. Emvelweni wemvelo, umzimba we-porous ungamunca noma ukhulule amanzi. Lapho izinga lokushisa langaphakathi liphezulu futhi umswakama uphansi, kancane kancane ibhodi likhipha umswakama kuma-micropores; Lapho izinga lokushisa langaphakathi liphansi futhi umswakama ephezulu, uzodonsa umswakama emoyeni. Lokhu kudedelwa nokuphefumula kwakha umphumela "wokuphefumula". Lokhu kuguqulwa kwe-cyclic yokugobhoza umswakama kanye nokukhululwa kudlala indima yokulungisa izinga lokushisa elingaphakathi lendlu futhi kwakha i-microclimate entofontofo yendawo yokusebenza neyokuphila.
5. Ukuvimbela umlilo
Izinto ze-GRG zingezokuqukethwe kweClass A okungekho umlilo. Lapho kwenzeka umlilo, izinto ze-GRG azikwazi nje kuphela ukubuyisa amadangatye, kodwa futhi futhi zikhulule u-15% kuya ku-20% wesisindo sawo samanzi, esinganciphisa kakhulu izinga lokushisa lendawo yokulahla futhi inciphise ukulahleka komlilo.
6. Ukuvikelwa kwemvelo
Izinto ze-GRG azinaphunga, futhi umkhawulo we-radionuclide uvumelana nezinga leKlasi A yokuhlobisa echazwe ku-GB6566-2001. Futhi ingeyokwendalo eluhlaza okwezemvelo.
7. Umphumela omuhle we-acoustic
Imiphumela yokuhlola ikhombisa ukuthi i-GRG impahla enobukhulu be-4MM ingena ku-500 Hz 23 d 100 Hz 27 db. Amandla adonsela phansi omile komoya yi-1.75, ehlangabezana nezidingo zokubonakaliswa okuhle kwe-acoustic. Ngomklamo omuhle wokulinganisa, kungenziwa isakhiwo esihle sokumunca umsindo ukufezekisa ukufakwa komsindo nokufakwa komsindo.
8. Umjikelezo wokulungisa omfishane
Isikhathi sokuwohloka kwemikhiqizo ye-GRG sithatha kuphela imizuzu engama-30 futhi isikhathi somile sithatha kuphela amahora ama-4. Ngakho-ke, isikhathi sokwakha singafushaniswa kakhulu.
9. Ukwakhiwa okuhle
I-GRG ingakheka ngokunqumela ngokuya ngokwakhiwa komklami, futhi ingakhiqizwa futhi ihlukaniswe ngamabhulokhi amakhulu. Ukusebenza kokusebenza kwesayithi kulungile, ukufakwa kuyashesha futhi kuvumelana nezimo, futhi umhlangano omkhulu we-seamless wasendaweni ungenziwa ukwakha ukwakheka okuphelele. Ikhulukazi umgodi, i-arc, ikona namanye amaphuzu amahle, angaqinisekisa ukuthi akukho phutha.
10. Ingaphezulu lezinto ezibushelelezi zibushelelezi futhi zintekenteke.
Ubumhlophe bufinyelela ngaphezu kwama-85%, futhi bungaboshelwa kahle ngezingubo ezahlukahlukene kanye nezinto zokwakha umhlobiso waphezulu ukwakha umphumela omuhle kakhulu wokuhlobisa.